Faransiiska oo ka cabanaya cunoqabatayn ay saareen dalalka Bariga Dhexe -
Dagaal dhex maray cidamada Itoobiya iyo Sudan iyo Dowlada Masar oo…
Senegal’s opposition leader Sonko was arrested on his way to Dakar…
Sarkozy conviction triggers right-back against “referee republic”
France bans right-wing anti-migration group Generation Identity
Hungary’s ruling party is leaving the center-right European group
Home News Faransiiska oo ka cabanaya cunoqabatayn ay saareen dalalka Bariga Dhexe
Faransiiska oo ka cabanaya cunoqabatayn ay saareen dalalka Bariga Dhexe
Dowladda Faransiiska ayaa dalalka Bariga dhexe ugu baaqay inay ka hortagaan dukaamadda iyo ganacsiyada qaadacay alaabaha dalkaas, kadib markii uu Madaxweyne Emmanuel Macron difaacay in la baahiyo sawir lagu tilmaamay Nebi Maxamed NNKH.
Alaabaha Faransiiska ayaa laga saaray dukaamo ku yaal Kuawait, Urdun iyo Qatar, halka dibedbaxyo kooban oo Faransiiska ka dhan ah ay ka dhaceen Liibiya, Gaza iyo waqooyiga Suuriya.
Fal celintan ayaa waxay salka ku haysaa faallooyin uu bixiyay Mr Macron ka dib dilkii loo geystay macalin Faransiis ah oo sawir gacmeedyo uu muujiyay Nebi Muxamed NNKH, tusay ardaydii fasalka ku jirtay.
Madaxweynaha ayaa sheegay in macallinka, oo lagu magacaabo Samuel Paty, “loo dilay sababta oo ah Islaamiyiintu waxay rabaan mustaqbalkeenna”, laakiin Faransiisku “kama quusan doono sawir gacmeedyada”.
Sawiradda Nabi Muxamed NNKH waxay muslimiinta u horseedi kartaa ciqaab culus sababtoo Islaamka wuxuu si cad u mamnuucayaa sawirrada Nabi Muxammad iyo Allaah SW.
Laakiin cilmaaniyadda dalka Faransiiska ayaa waxay udub dhexaad u tahay aqoonsiga qaranka Faransiiska.
Faransiiska ayaa sheegay in xakamaynta xorriyatul qowlka si loo ilaaliyo dareenka koox gaar ah, ay wiiqayso midnimada dalka.
Axadii, Mr Macron wuxuu laba jibaaray difaacidda qiimaha Faransiiska waxa uuna qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku yiri: “Isma dhiibeyno, waligeen.”
Axadii, Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Mr Macron uu u baahan yahay “baaritaan dhanka Maskaxda ah.
Hadalka Erdogan ayaa horseeday in Faransiiska ay dib ugu yeeraan safiirkooda u fadhiya Turkiga.
Qaar ka mid ah goobaha laga dukaameysto ee dalalka Urdun, Qatar iyo Kuwait ayaa ilaa Axaddii laga xayuubiyay alaabtii Faransiiska.
Previous articleTaliyaha ciidamada Booliska Soomaaliyeed oo booqday saldhigyo ku yaal Dhuusamareeb
Next articleTunisians are calling for the prosecution of lawmakers who condoned the murder of a French teacher